६७ रुपैयाँ ५० पैसा ज्यालामा भैरवनाथको रथ बनाउने नेतृत्व ! – indepth.com.np
भैरवनाथको रथ बनाउने काममा व्यस्त सिकर्मी नाइके प्रेमलाल शिल्पकार । तस्बिरहरु : ईश्वरकाजी खाइजू
भक्तपुर । कोही पत्याउनुहुन्छ, भैरवनाथको रथ बनाएको दैनिक ज्याला ६७ रुपैयाँ ५० पैसामात्रै भन्दा ? अहिले सामान्य मजदुरले समेत एक बोरा भारी बोकेको ज्याला १०० रुपैयाँ घटी मान्दैनन् । भारी बोक्न कुनै सीप र कुशलता आवश्यक पनि पर्दैन । यसहिसाबले सीपले दक्ष त्यसमाथि कालीगढको दैनिक ज्याला कति होला ?
भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का जात्राको प्रमुख आकर्षण भैरवनाथको रथ बनाउने सिकर्मी नाइकेको दैनिक ज्याला ६७ रुपैयाँ ५० पैसामात्रै भन्दा सायदै कोही पत्याउलान् ! तर नपत्याई सुखै छैन ।
गुठी संस्थान भक्तपुरले भैरवनाथको रथ बनाउने सिकर्मी नाइकेलाई उक्त दैनिक ज्याला दिँदै आएको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । जुन ज्यालाले पेटभरि खाजा खान पनि पुग्दैन ।
‘दैनिक ज्याला ६७ रुपैयाँ ५० पैसामा काम गरेकै २० वर्ष भइसक्यो’, सिकर्मी नाइके प्रेमलाल शिल्पकारले भने, ‘यसअघि त दैनिक ८ रुपैयाँमात्रै ज्याला थियो ।’
उनका अनुसार दिनभरि काम गरे पनि खाजा आफ्नै खल्तीको पैसाले खानुपर्छ ।
भक्तपुर नपा ५ टौमढीस्थित पाँचतले र भैरवनाथ मन्दिर परिसरमा भैरवनाथको रथ बनाउने काम अहिले धमाधम भइरहेको छ । रथ बनाउने कामको नेतृत्व उनै सिकर्मी नाइके प्रेमलालले गर्दै आएका छन् ।
उनी भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ बनाउन गुठी संस्थानबाट नियुक्ति पाएका सिकर्मी नाइके हुन् । ११ वर्ष छँदै बाजे कैसे शिल्पकारसँग रथ बनाउने काममा खटिँदै आएका प्रेमलाल आफैले नेतृत्व लिएको भने २० वर्ष भयो ।
उनले २०५८ सालदेखि सिकर्मी नाइके भएर भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ बनाउँदै आएका छन् । उनीअघि उनका बुबा मंगलाल सिकर्मी नाइके थिए ।
अहिले प्रेमलालले अरु आठ जनालाई साथमा लिएर काम गरिरहेका छन् । जसमा कोही सिकर्मी छन् भने कोही कालीगढ । केहीको संख्यामा सहयोगी पनि छन् । प्रेमलाल मातहतमा काम गर्ने सिकर्मी र कालीगढले भने उनको भन्दा २ सयदेखि ३ सय गुणा बढीसम्म ज्याला बुझ्छन् ।
‘सिकर्मीलाई दैनिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ र कालीगढलाई दैनिक दुईहजार रुपैयाँ ज्यालाको व्यवस्था गरेका छौं’, प्रेमलालले गर्वसाथ भने ।
यस वर्ष उनका छोरा प्रेमकृष्ण पनि कालीगढको रुपमा भैरवनाथको रथको काम गर्दैछन् । प्रेमकृष्णले साथीको रुपमा प्रलव शिलाकार ल्याएका छन् । उनीहरु दुईजनाले भैरवनाथको नयाँ बेतसिँमा बुट्टा कुँद्ने काम गरेका छन् ।
रथको काम गर्ने प्रेमकृष्ण र प्रलवमात्रै युवा पुस्ताका छन् । अरु सबै प्रेमलालकै पुस्ताका छन् ।
माग गुठी संस्थानले सुनेन : प्रेमलाल
प्रेमलालले आफ्नो ज्याला अति नै न्यून भएकोले बढाउन वर्सेनि माग गर्दै आएका छन् तर गुठी संस्थान अहिलेसम्म बहिरो भई बसेको उनले गुनासो पोखेका छन् ।
‘भक्तपुरस्थित गुठी कार्यालयले सुनेन भनेर केन्द्रैसम्म पुगेर मागपत्र दिएकै १० वर्ष भयो’, उनले दुःख पोखे, ‘मासिक रुपमा ४ हजार तलब देऊ भन्दा पनि गुठी संस्थान बहिरो भएर बसेको छ ।’
अब त १२ हजार रुपैयाँ मासिक तलब नदिए अर्को वर्षदेखि नाइके पद नै छोड्ने प्रेमलालले चेतावनी दिए ।
‘अघिल्लो वर्ष नै छोड्ने तयारी गरेको थिएँ’, उनले थपे, ‘कोरोना भाइरसले काम नै गर्न पाएन ।’
गुठी संस्थानले अर्को वर्षदेखि रकम बढाइदिने आश्वासन दिएकाले मात्रै यस वर्ष काममा फर्किएको उनी बताउँछन् । हुन त आश्वासनमात्रै पाएको बीसौं वर्ष भइसक्यो । ‘गुठीले सधैं अर्को पालि भन्दै आएको छ’, प्रेमलाल भन्छन्, ‘तर मेरोलाई अर्को पालि अहिलेसम्म कहिल्यै आएन ।’
गुठी संस्थान भक्तपुरका प्रमुख आनन्दप्रसाद कर्माचार्यले बिस्का जात्राको लागि महिना दिन काम गरे पनि वर्षदिनकै रकम दिएको जिकिर गर्छन् ।
तैपनि समय परिस्थितिअनुसार त्यसको पुनरावलोकन हुने उनले सुनाए ।
अरु चार नाइके बेपत्ता !
हुन त प्रेमलालमात्रै भैरवनाथको रथ बनाउने सिकर्मी नाइके होइनन् । गुठी लगतमा उनीसँगै अरु पाँचजना सिकर्मी नाइके छन् । जुन घट्दै घट्दै अहिले प्रेमलाल एक्ला नाइके छन् ।
प्रेमलालका अनुसार उनका बाजे कैसे शिल्पकारसँगै तुलसीकुमार शिलाकार, हर्षलाल शिल्पकार र शंकर शिल्पकार सिकर्मी नाइके थिए । एकजनाको नाम उनले बिर्सिए । जसको अहिले आएर वंश नै सिद्धिएको उनी बताउँछन् ।
तुलसीकुमार, हर्षलाल र शंकरका भने अहिले नि छोरानाति छन् तर उनीहरु भैरवनाथको रथ बनाउने काममा फर्किएका छैनन् । न गुठी संस्थानले उनीहरुको खोजी गरेको छ न त उनीहरु नै सम्पर्कमा आएका छन् ।
तुलसीकुमारका नाति लक्ष्मीप्रसा दभने ७ वर्षअघिसम्म सिकर्मी नाइकेको रुपमा रथ बनाउन आएको प्रेमलालले जानकारी दिए ।
भैरवनाथको रथको नयाँ बेतसिँमा बुट्टा भर्दै कालीगढ प्रेमकृष्ण शिल्पकार ।
उनका अनुसार गुठी संस्थानले ताकेता नगर्दा अरु नाइकेका छोरानाति भएर पनि रथ बनाउने काममा आएका छैनन् । यहीं अवस्था भए प्रेमलालले उनको शेषपछि उनका छोराहरु भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ बनाउन नआउने चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘पहिले रथ बनाउने काममा कुनै पनि सिकर्मी नाइके नआए घरमा प्रहरी पठाइन्थ्यो । काममा आउन नमाने प्रहरीले समाएर लान्थ्यो’, विगत सम्झँदै उनले भने, ‘तर अहिले कसैलाई मतलव छैन । गुठी संस्थानलाई नै वास्ता छैन ।’
भैरवनाथको रथको नयाँ बेतसिँमा बुट्टा भर्दै कालीगढ प्रलव शिलाकार ।
उनका अनुसार सिकर्मी नाइकेहरुलाई पहिले गुठी जग्गाको समेत व्यवस्था गरिदिएको थियो । पछि सरकारले गुठी जग्गा रैतानी गर्न खुला गरेपछि अहिले जग्गाविहीन हुँदा पनि सिकर्मी नाइकेहरुले रथ बनाउने काममा चासो नदिएको जानकारीहरु बताउँछन् ।
उनीहरुका अनुसार गुठीले अत्यन्त न्यूनमात्रै तलब दिने र भएको गुठी जग्गा पनि रैतानी भएपछि थप आयस्ता नभएपछि जात्रापर्व लोप हुँदै आएका छन् । यस्तै स्थिति भए बिस्का जात्रा पनि लोप हुन धेरै समय पर्खिन नपर्ने संस्कृतिकर्मीहरु बताउँछन् ।
Related Topics:Biska JatraFeaturedSpecialTOURISM
यसवर्ष बिस्का जात्रा नरोक्न जोड